ANYỊ NA-EJI GAM AKPORO DỊ KA NKE ABỤỌ NYOCHA MAKA LAPTỌỌPỤ MA Ọ BỤ PC - N'IHI BEGINNERS - 2020
Ọ bụghị onye ọ bụla maara, mana mbadamba nkume gị ma ọ bụ smartphone na gam akporo nwere ike iji dịka nlekota nke abụọ maka kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. Nke a abughi ihe dị anya site n'aka gam akporo gaa na komputa, ma banyere elele anya nke abụọ: nke gosipụtara na ntọala ihuenyo na nke ị nwere ike igosi ọdịiche dị iche site na isi nyocha (lee Otu esi ejikọta ndị nyocha abụọ na kọmputa ma hazie ha).
Na ntuziaka a - ụzọ 4 iji jikọọ gam akporo dị ka nyocha nke abụọ site na Wi-Fi ma ọ bụ USB, banyere ọrụ dị mkpa na ntọala ndị nwere ike, yana ụfọdụ nuances ndị ọzọ nwere ike ịba uru. O nwekwara ike ịbụ ihe na-akpali mmasị: Ụzọ na-adịghị mma iji ekwentị ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
iDisplay na Twomon USB
SpaceDesk bụ ngwọta n'efu maka iji ngwaọrụ gam akporo na iOS dịka nyocha nke abụọ na Windows 10, 8.1 na 7 na njikọ Wi-Fi (enwere ike ijikọ kọmputa ahụ site na cable, ma ọ ghaghị ịdị na netwọk ahụ). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile a na-akwadoghị n'oge a.
Download ma wụnye na ekwentị gị ngwa ngwa SpaceDesk dị na Ụlọ Ahịa Play - //play.google.com/store/apps/details?id=ph.spacedesk.beta (ngwa dị ugbu a na Beta, ma ihe niile na - arụ ọrụ)
Site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ, budata ọkwọ ụgbọala nyochaa nke ọma maka Windows ma wụnye ya na komputa ma ọ bụ laptọọpụ - http://www.spacedesk.net/ (Nbudata mpaghara - Software Driver).
Gbaa ngwa ahụ na ngwaọrụ Android ejikọrọ na netwọk ahụ dị ka kọmputa. Ndepụta a ga-egosipụta kọmputa nke arụnyere ngosi ngosi SpaceDesk. Pịa na njikọ "Njikọ" na adreesị IP mpaghara. Kọmputa nwere ike ịnwe ikwe ka ọkpụkpọ SpaceDesk nweta ọrụ netwọk ahụ.
Emela: Ihuenyo Windows ga-apụta na ihuenyo nke mbadamba ma ọ bụ ekwentị na ihuenyo mbipute ihuenyo (ọ bụrụhaala na ịhazibeghị nhazi desktọọpụ ma ọ bụ ọnọdụ ngosi na naanị otu ngebichi).
Ị nwere ike ịmalite ọrụ: ihe niile na-arụ ọrụ na-eju anya ngwa ngwa maka m. A na-akwado nkwado site na ihuenyo gam akporo ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, site na ịmepe ntọala ihuenyo Windows, ị nwere ike ịhazi otu esi eji ihe ihuenyo nke abụọ: maka mbiputegharị ma ọ bụ maka ịgbasa desktọọpụ (maka nke a - na ntụziaka ahụ a kpọtụrụ n'elu n'elu ijikọta abụọ monitors na kọmputa, ihe niile bụ otu ebe a) . Dịka ọmụmaatụ, na Windows 10, nhọrọ a dị na nhọrọ ihuenyo n'okpuru.
Tụkwasị na nke ahụ, na ngwa SpaceDesk na gam akporo na mpaghara "Ntọala" (ịnwere ike ịga ebe ahụ tupu ịme njikọ) ị nwere ike ịmezi ihe ndị na-esonụ:
Ogologo / ịrụ ọrụ - ebe a ị nwere ike ịtọlite ​​àgwà oyiyi ahụ (nke ka mma), agba omimi (obere - ngwa ngwa) na ọnụ ọgụgụ etiti achọrọ.
Mkpebi - nyochaa mkpebi na gam akporo. Kwesịrị, setịpụ ezigbo mkpebi eji na ihuenyo, ma ọ bụrụ na nke a anaghị eduga nkwụsị ngosi dị ịrịba ama. Ọzọkwa, n 'ule m, a gbanwere ndabara ndabara karịa ihe ngwaọrụ na-akwado n'ezie.
Touchscreen - ebe ị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ njikwa site na iji ihuenyo mmetụ gam akporo, ma gbanwee ihe ọrụ sensọ: Mmetụta zuru oke pụtara na ịpị ga-arụ ọrụ kpọmkwem n'ebe ị na-arụ, Touchpad - ịpị ga-arụ ọrụ dịka ọ bụrụ na ihuenyo ngwaọrụ ahụ touchpad
Ntugharị - nhazi ma ihuenyo na-agbanwegharị na kọmpụta n'otu ụzọ ahụ ọ na-agbanwe na ngwaọrụ mkpanaka. N'okwu m, ọrụ a emetụtaghị ihe ọ bụla, ngbanwe ahụ emeghị n'ọnọdụ ọ bụla.
Njikọ - njikọ nke njikọ. Dịka ọmụmaatụ, njikọ akpaka mgbe a na-achọpụta ihe nkesa (ya bụ, kọmputa) na ngwa.
Na kọmputa, ọkwọ ụgbọala SpaceDesk na-egosiputa akara ngosi na ebe ngosi, site na ịpị ị nwere ike mepee ndepụta nke ngwaọrụ gam akporo, gbanwee mkpebi ahụ, ma gbanyụọ ikike ị jikọọ.
N'ozuzu, mmetụta m nwere banyere SpaceDesk dị ezigbo mma. Site n'ụzọ, site n'enyemaka nke ọrụ a, ị nwere ike ịbanye na nyocha nke abụọ ọ bụghị naanị ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iOS, kamakwa, dịka ọmụmaatụ, kọmputa Windows ọzọ.
O di nwute, SpaceDesk bụ naanị ụzọ zuru ezu maka iji jikọọ gam akporo dị ka ihe nyocha, ndị fọdụrụ 3 chọrọ ịkwụ ụgwọ maka iji (ma e wezụga Splashtop Wired X Display Free, nke a pụrụ iji maka nkeji 10 maka n'efu).
Ngwa ngwa XDisplay dị na Splashtop Wired ngwa dị na free (Free) ma kwụọ ụgwọ nsụgharị. Ọrụ efu na-arụ ọrụ nke ọma, ma oge eji ya eme ihe - minit 10, n'eziokwu, a na-ezube ime mkpebi nkwụsị. Windows 7-10, Mac os, Android na iOS na akwado.
N'adịghị ka mbipute gara aga, njikọ nke Android dị ka nyochaa na-arụ site na eriri USB, usoro ahụ bụ ihe ndị a (atụ maka nsụgharị Free):
Download na wụnye Wired XDisplay Free na Ụlọ Ahịa Play - //play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.xdisplay.wired.free
Wụnye usoro XDisplay Agent maka kọmputa na-agba ọsọ Windows 10, 8.1 ma ọ bụ Windows 7 (Mac kwadoro) site na ibudata ya na saịtị saịtị site na http://www.splashtop.com/wiredxdisplay
Kwado USB debugging na ngwaọrụ gam akporo gị. Wee jikọọ ya na eriri USB na kọmputa na-agba ọsọ XDisplay Agent ma mee ka ọ debugging na kọmputa a. Ntị: Ị nwere ike ibudata ọkwọ ụgbọala ADB nke ngwaọrụ gị site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta nke mbadamba ma ọ bụ ekwentị.
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma, mgbe ị hapụchara njikọ na gam akporo, kọmputa ga-apụta na ya. Ngwaọrụ Android ahụ ga-ahụ anya dịka nyocha nke ọma na Windows, nke ị nwere ike ịrụ ọrụ niile ọ bụla, dika dị na ikpe gara aga.
Na Wired XDisplay programmụ na kọmputa gị, ịnwere ike ịhazi ntọala ndị a:
Na Ntọala taabụ - nyochaa mkpebi (Mkpebi), ọnụego etiti etiti (Ogo) na ogo (Ogo).
Na Di elu taabụ, ị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ mwepụ nke usoro ihe omume ahụ na kọmputa gị, wepụkwa ọkwọ ụgbọala nyochaa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ihe m na-eche: ọ na-arụ ọrụ, nke ọma, ma ọ dị ntakịrị nwayọọ karịa SpaceDesk, n'agbanyeghị njikọ njikọ USB. M na-atụ anya ka okwu gbasara njikọ maka ụfọdụ ndị ọrụ ọhụụ ọ bụla n'ihi na ọ dị mkpa ka ha nwee ike iji USB debugging na ọkwọ ụgbọala.
Rịba ama: ọ bụrụ na ịnwa usoro a ma wepụ ya na komputa gị, rịba ama na na mgbakwunye na Splashtop XDisplay Agent, ndepụta nke mmemme a ga-etinye ga-enwe Splashtop Software Updater - ehichapụ ya, ọ gaghị eme nke ahụ.
iDisplay na Twomon USB bụ ngwa abụọ ọzọ na-ekwe ka ị jikọọ gam akporo dịka nyocha. Onye mbụ na-arụ ọrụ na Wi-Fi ma kwekọọ na nsụgharị dị iche iche nke Windows (malite na XP) na Mac, na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsụgharị nile nke gam akporo na ọ bụ otu n'ime ngwa mbụ nke ụdị a, nke abụọ bụ site na USB ma na-arụ ọrụ naanị maka Windows 10 na android malite na Ụdị nke isii.
Enweghị m ihe ọ bụla n'ime ngwa ndị ọzọ - a kwụrụ ha ụgwọ. Nwere ahụmahụ na-eji? Kwuo ihe. Nyocha na Ụlọ Ahịa Play, n'aka nke ya, bụ multidirectional: si "Nke a bụ usoro kachasị mma maka nyocha nke abụọ na gam akporo," na "Ọghị arụ ọrụ" na "Ịtọtu usoro."
Nwere olileanya na ihe a bara uru. Ị nwere ike ịgụ banyere atụmatụ ndị dị otú a ebe a: Usoro kachasị mma maka ịnweta ohere na kọmputa (ọtụtụ ọrụ na gam akporo), Njikwa Android site na kọmputa, Foto mgbasa ozi sitere na Android ruo Windows 10.